Xawaaladaha Soomaalida oo lagu eedeeyay u adeegida kooxaha kaganacsada hubka sharci-darrada ah - Tilmaan Media
Xawaaladaha Soomaalidu waxay kooxaha ka shaqaysta hubka sharcidarrada ukala gudbiyeen lacag gaaraysa $37 malyan oo doollar. Waxaana kamid ah dadkaas kuwa kasoo jeeda dalka Yemen oo dowladdu Maraykanku cunaqabatayn kusoo rogtay sabaabo laxiriira xiriir ay laleeyihiin malleeshiyaadka ka dagaalama Yemen. Sidaas waxaa lagu yiri warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Reuters ayaa warbixinteeda kasoo xigatay baaritaan uu sameeyay urur daba gala dambiyada xuduudaha dhaafa ee caalamka xaruntiisuna tahay magaalada Geneva, ayaa lagu sheegay in arrintaan ay adkaynayso in xawaaladaha Soomaalidu lajaan qaadaan sistamka adeega bangiyada ee caalamka.
Inkasta oo xawaaladuhu udub-dhexaad u yihiin nolosha malaayiin qof haddana waxay wada shaqayn laleeyihiin bangiyo fara kutiris ah, sababtuna waxay tahay khattarta ka imaan karta baal marida shuruucda iyo siyaasadaha caalamiga ee faraya daahfurnaanta iyo kahortaga hawlaha maaliyadeed ee sharciga baalmarsan.
Mar wax laga waydiiyay eedaymaha xawaaladaha loo soo jeediyay Bankiga Dhexe ee Soomaaliya, masuuliyiintu waxay sheegeen inaysan arintaan war u hayn, baaritaana ay samaynayaan, sidoo kale waxay sheegeen in hormar laga sameeyay kahortaga maalgalinta argagixisada. ayaa lagu warbixinta Reuters.
Xiriir ay lasamaysay Reuters afarta shirkadood ee eedaymaha loosoo jeediyay waxay sheegeen inay ku dadaaleen in ay raaceen shuruucda caalamiga ah ee hubinta macmiilka. Soomaaliya malahan kaararka aqoonsiga qofeed ee lagu kala saari karo dadka.
Baaritaanka ayaa muujiyay in 6 dii sano ee u dambaysay 176 lacag dirid ay lugta la gashay kooxaha hubka tahriibiya oo kusugan dalalka Soomaaliya iyo Yemen. Saddex meelood lacagta ladiray ayaa kabadnayd 10,000 oo doollar.
Labo xawwilaad oo tiiba ahayd $40,000 waxaa lala xiriiriyay Sayf Abdulrab Salem al-Hayashi oo dowladda Maraykanku 2017 kusoo rogtay cunqabatayn. Al-Hayashi ayaa lagu eedeeyay inuu hubka taageero hub iyo dhaqaale u fidiyo kooxda Alqaacidada Jaziiradda Carabta iyo ISIS.
Waxaa baaritaanka lagu sheegay in xawaaladaha Amal iy Iftin ay ninkaan u fududeeyeen adeega xawaaladda iyadoo la adeegsanayo magacyo kala duwan. Labada xawaaladood ayaa iska fogeeyay eedaymaha loosoo jeediyay.
Baaritaanka ururka uu sameeyay wax eedayn toos ah uma soo jeedin xawaaladaha Amal iyo Taaj. Laakiin waxaa la ogaaday marar badan oo dadku awoodaan in ay lacag ku dirsadaan ama ku qaataan magacyo iyo teleefano kala duwan.